Atooraha Reer Telugu Nani Waa Xidig Guusha Saaxiib La Ah Madaama Filimkiisa Nenu Local Hit Noqday - Hablaha Media Network
Atooraha Reer Telugu Nani Waa Xidig Guusha Saaxiib La Ah Madaama Filimkiisa Nenu Local Hit Noqday
HMN:- Atooraha reer Telugu Nani farxad uma dhino madaama filimkiisa Nenu Local maalmo kooban Hit dhameestiran ku noqday waana filimka sedexaad ee xidigaan Hit u noqonaayo.
Nani oo sanadkii hore sameeyay filimada Hit-ka weyn noqdeen Krishna Gaadi Veera Prema Gaadha iyo Gentelman haatana liiska guushiisa waxaa sii kaabay filimka Nenu Local.
Nani filimka Nenu Local waxaa la jileyso atirishada Keerthy Suresh waxaana tiyaatarada la saaray 3 bishii Febraayo ee sanadkaan asigoo siweyn sheekadiisa loo soo dhaweeyay.
Filimka Nenu Local inuu guul lixaad leh gaaro waxaa ka caawiyay in lagu qarash gareeyay 25 Crore waxaana kooxda cajaladaha qeybiyaan lagu siiyay 19 Crore.
Filimka Nenu Local waxaa u suura gashay in sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka inuu kasoo xareeyo 24 Crore sidoo kalena saami ahaan kooxda cajaladaha qeybiyaan ay ka heleen 15.04 Crore.
Nenu Local hoos u dhac weyn ma sameynin maal maha shaqada sidaa darteed Isniintii iyo Talaadii filimkaan ganacsi wacan ayuu sameeyay ilaa haatana kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ka heleen saami ahaan 19 Crore.
Sidaa darteed todobaadkiisa kowaad marka uu dhameesto ayuu Hit dhameestiran noqon doonaa balse inuu Super Hit gaaro shaqo culus ayaa hortaalo madaama filimka Singam 3 dhamaan gobolada Hindiya awood ku qaban doono laga bilaabo maalinta berito ah.
Nani farxad uma dhino madaama filimkiisa Nenu Local Hit dhameestiran noqday hadii saami ahaan kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaan 26 Crore ilaa 30 Crore dabcan Hit dhameestiran ayuu noqon doonaa.
F.G: Nani waa atoorihii jilay filimka Eega ee Director SS Rajamouli iska lahaa kaasi oo sanadii 2012 soo baxay sidoo kalena Blockbuster weyn noqday, dabcan waa filimka tixsiga aar gudanaayo markii Nani la dilo qofkii daawaday asigoo Af Soomaali ah ayaa fahmi karo.